Ihluzo izinhlelo: izinhlobo kanye amathuba
Ihluzo izinhlelo ezincane ezisetshenziswa ngezindlela ezihlukahlukene ukuzibonakalisa, phakathi okuyizinto abaklami, bezithombe, abakhi kanye nabanye. Kuye inani imisebenzi, lokhu kungaba usayizi esikhulu kakhulu (ihluzo amaphakheji) kanye ovamile, Njengoba Paint Windows iphakethe.
Sekukonke kukhona izinhlobo ezintathu isofthiwe enjalo, kuhlanganise Vector ihluzo, izithombe bitmap, kanye namathuluzi ngokudala 3D-izithombe. Raster ihluzo izinhlelo idwebe isithombe iphuzu, sicela ngamunye wabo e kokugqama nombala. A Vector ukudala lonke umugqa, umumo, noma arc. Futhi bavumela sebuningini zokukhwabanisa Patterned - ukushintsha izingqimba, welule noma cindezela isithombe, ukwakha amaphethini esekelwe ilungu elilodwa, ukuhlinzeka sebuningini processing image salokhu onqenqemeni, ukukhanya izihlungi, futhi abanye.
Vector ihluzo izinhlelo (Corel Ukudonswa, njengoba i-Adobe Illustrator) ngokuyinhloko asetshenziswa zonke izinhlobo isakhiwo, graphic design, ukukhiqizwa kwanoma izincwadi, omagazini, kanye nezinsiza zokuqhubela. Ngosizo lwabo, avame udonsa logo kanye nezimpawu. In the version ikhokhwe has lenqwaba ongakhetha, kuhlanganise nombala kuhlangana nokudala kusezandleni zakho ifomu ewubuciko kakhulu. Ezinye izinhlelo ze- graphic design ungakha animations ngokuhlanganisa eziningana izithombe, ehoshiweyo umhleli, noma ukulandwa ngokwehlukana.
Raster esimisweni esifanayo efanelekayo ukucutshungulwa izithombe, scan zokugcina. Basebenzisa retouching kanye Blur, esilufifi, umbala ofanayo, ushintsho ukugqama noma ukucaciseleka, ukukhethwa ozimele, ukwengeza umbhalo, kanye nabanye. Abasebenzisi edume kunazo ithole Photoshop, inguqulo yakamuva ezingasetshenziswa ukucubungula izithombe digital ngendlela engeyinhle. A option enhle khulula inethiwekhi sesithombe Onservis, okuyinto ikuvumela ukuba ushintshe izithombe ngqo kusiphequluli sakho.
Ukuze ukuhlomisa indlu yakho noma indawo, ungakwazi umeme umklami professional, okungukuthi amasevisi bayigugu ngokwanele kakhulu. Futhi ungakwazi ngokuzimela ukuhlela isikhala sakho ephilayo, yini eyosisiza 3D-software, sesithombe okuvumela ukudweba endlini olinganise kwesokudla, ukubeka kulo ifenisha, sithathe umbala ukuthungwa iphepha lokunamathisela odongeni, ukufaka amapayipi, khetha flooring, amakhethini, njll Kukhona ezinye izinhlelo engahileli zokuba umuntu aqeqeshelwe amakhono. Lezi zihlanganisa wohlelo 3D, VisiCon, 3D, Ultimate Ikhaya Dream »Abanye, njengoyise Cyber Ukunyakaza 3D Umklami noma Xilinx PlanAhead, zidinga ulwazi e ukwakha okusezingeni nokuklama.
Kukhona futhi ingcaca Uhlelo zokuphetha ku-3D, isibonelo, Blender imahhala, okuyinto inketho ezengeziwe ngesimo yokumodela, izithombe, ukusebenza izinhlayiya kanye sekulingisa uketshezi. Ungayisebenzisa ngokwakho ukudala opopayi elula, ngoba Umkhiqizo interface kuyinto enembile. A ezihlukahlukene abahleli sokuqhafaza inikeza ithuba elikhulu ukusebenza nezingane nge nekunciphisa okudlekayo e ifomu upende nephepha.
Indlela yokwenza esizenzakalelayo ku-Windows?
Infographics: indlela, izifanekiso, izibonelo,
Siri: Iyini umsizi izwi kusukela Apple?
Izindlela ezilula ezimbalwa ukuze uthuthukise nokucija ku-Photoshop
Distribution: kuyini? Izibonelo OS kukaMoya nezinhlelo
Kangakanani isitifiketi ukudla?
Baku amajuba (inkomishi lendze): incazelo zohlobo
Kuyini ngakwesokunene? Umlando izindawo elivela kuzo igama
"Jean-Jack" - indawo yokudlela, iphupho gourmet komculo Russia
Indlela Beka umkhawulo Internet Speed
Indlela Yokungcono Ukucindezela Ezimweni Zasekhaya
Laminate "Egger" - izinga okusezingeni isigubungelo phansi
Daniil Belyh: Filmography futhi ukuphila siqu (izithombe)
Ukuhlanza amatshe on the amazinyo
Udweba kanjani umcibisholo amehlo? Funda indlela yokwenza ephelele iso makeup
Zelenogorsk ehhotela "Aquamarine". Ukubuyekeza, Amanani
Iyini inkonzo: izici umqondo